Vahaolana manokana an'ny Aerospace amin'ny alàlan'ny fanariana & Cnc Machining - Casting Minghe
Vahaolana Aerospace Parts By Casting & Cnc Machining
IATF 16949 MANKATSITRA CAST MANUFACTURING SY CNC MACHINING ho an'ny fizarana AEROSPACE
Ny faritra Aerospace dia fitaovana manidina na mivoaka ny habakabaka (habakabaka). Ireo singa fiaramanidina dia manondro ireo faritra samihafa mandrafitra ny fiaramanidina. Ny singa tsirairay dia mitana andraikitra lehibe amin'ny tsy fivadihan'ny fiaramanidina sy ny fizotran'ny fiaramanidina ary ny singa tsirairay dia samy manana ny andraikiny manokana ary ilaina izany. indrindra tafiditra ao:
Fitaovana sy fitaovana teknika Aerospace ilaina amin'ny fikojakojana sy fanamboarana.
Fitaovana sy fitaovana manokana hanohanana ny serivisy serivisy.
Fitaovana sy fitaovana manokana hanaovana andrana fikarohana siantifika aerospace. Manokana, ilazana ny: vatan'ny fiaramanidina sy ny faritra iva, motera fiaramanidina sy ny faritra iva, fitaovana elektrika fiaramanidina sy ny faritra iva, fitaovana oksizenina fiaramanidina sy ny faritra iva, fitaovana elektronika amin'ny radio fiaramanidina sy ny faritra iva, ny faritra mahazatra an'ny fiaramanidina ary bearings.
Fitaovana fandrefesana aerospace isan-karazany sy fitaovana fanandramana ary kojakoja fampiasa, fitaovana ary fitaovana ampiasaina amin'ny fikojakojana ny tany, ary metaly sasany mifandraika amin'izany. Akora na vokatra simika sy organika sns ... Ny faritra rehetra amin'ny fiaramanidina dia hanana karazana tsy fahombiazana maro samihafa mandritra ny fiasana. Mba hitazomana ny sidina mahazatra ny sidina ary hampihenana ny fidinan'ny fiaramanidina, ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka rehetra dia hanana tahiry fiaramanidina arakaraka ny toe-javatra samihafa. Ho an'ny fiaramanidina fotodrafitrasa sasany sy ny faritra aerospace dia ilaina ny fanamboarana ny ampahany betsaka amin'ny volavolan-dalàna ary ny fanamafisana ny haben'ny ampahany kely. (Casting titanium) Minghe Casting dia mifanaraka amin'ny filan'ny casting casting sy ny milina CNC.
Ny serivisy fivarotana milina indostrialy dia misy ny masinina amin'ny aerospace ary ny vokatra aorinan'ny aerospace. Ao amin'ny Minghe Casting, manana fomba roa misy lafiny roa amin'ny fitaovana stratospherika sy ny fepetra takiana amin'ny indostrian'ny aerospace isika. Miakatra amin'ny fanamby izahay amin'ny famolavolana singa matevina avo lenta natao ho an'ny fiara manidina maoderina, ary mitazona hatrany ny fenitra henjana amin'ny fandefasana ara-potoana sy ny kalitao azo antoka notazoninay nandritra ny antsasaky ny taonjato.
Mifandraisa amn'ny injenieran'ny partieur aerospace antsika anio mba hiresaka momba ny mombamomba ireo tetikasanao sarotra.
1. Fampiharana Components Aerospace mahazatra.
Ny traikefan'i MINGHE dia tsy manam-paharoa amin'ny famolavolana, ny fampandrosoana ary ny fanamboarana ny vahaolana maty ho azy ary ny vahaolana amin'ny milina cnc ho an'ny fampiharana aerospace marobe, ao anatin'izany fa tsy ferana amin'ny:
Ireo singa fiaramanidina: rindrina elatra / spar / longitudinal / rib rib / fitaovam-pitaterana / absorber shock / fitaovana fametahana fitaovana
Sambon-danitra olona: mazàna dia misy kabine orbital, kabine misy serivisy, kabine docking, ary kabine miverina amin'ny ekipa.
Ny firafitry ny satelita: firafitra mitondra enta-mavesatra, akorandriaka, ampahany mihombo, firafitry ny antena, sela misy masoandro, rafitra miorina amin'ny satelita.
balafomanga: Izy io dia misy lohan-doha, lohan-doha, tanky oxidizer ary tankin-tsolika (mpiasan'ny fandoroana), fitoeran-java-maneno, fizarana eo anelanelan'ny sehatra, firafitry ny motera fanodinana, efamira amin'ny rambony ary faritra hafa. Ireo ampahany mila misaraka dia misy fitaovana fampifandraisana misaraka.
Balafomanga: Izy io dia misy rafitra mpiady, rafitra hery, rafitra fitarihana ary vatan'ny balafomanga.
2.Nahoana no mifidy anay amin'ny tetik'asa Aerospace Parts
Minghe dia manana traikefa mihoatra ny 30 taona manampy ireo mpanamboatra aerospace manamboatra singa mekanika mahomby. Rehefa miara-miasa amin'i Minghe ianao dia afaka mahazo ireto tombony manaraka ireto amin'ny fizotrantsika fanariana faty:
Ny asan'ny casting casting an'i Minghe dia misy presse 40 manomboka amin'ny 250 ka hatramin'ny 3000 taonina. Izahay dia mandray ny sasantsasany amin'ireo hazakazaka Aerospace izay mitaky fatratra indrindra amin'ny resaka habetsahana, ny haben'ny ampahany ary ny fahasarotana. Noho ny fahaizanay momba ny injeniera sy ny maodely dia fantatry ny mpanjifanay aminay ho toy ny orinasa afaka mampihena ny fahasarotana amin'ny ampahany izahay ary hahatonga ny fizotran'ny fanamboarana hahomby kokoa.
Minghe dia ISO Certified Die Casting Manufacturer ary manana traikefa betsaka amin'ny famolavolana sy ny famokarana zinc sy ny aliminioma amin'ny famaritana kalitao Aerospace.
Miaraka amin'ny milina fanontam-pirinty manomboka amin'ny lehibe ka hatramin'ny kely, manana ny fahaizany manamboatra faritra aerospace amin'ny habe rehetra isika, manomboka amin'ny faritra kely ka hatramin'ny trano lehibe.
Izahay ITAF 16949 voamarina ary afaka manome ampahany amin'ny famokarana ho an'ny miaramila sy ny aerospace fampiharana.
3. Serivisy fanamboarana hafa ho an'ny faritra Aerospace manokana
Ankoatr'izay, Minghe dia manome ny masinina CNC, fanodinana famatsiam-bola, fanariana fasika ary serivisy hafa mifandraika amin'ireo faritra namboarina manokana.
Cnc Machining Aerospace faritra
Fizarana casting Casting Aerospace
Fizarana famafazana fandroana fasika
4.Ny fahafahan'ny famokarana mazava ho an'ny faritra Aerospace
Ho fanampin'izany, Minghe koa dia manome ny masinina CNC, fanodinam-bola, fanariana fasika ary serivisy hafa mifandraika amin'ireo faritra aerospace namboarina.
Fitaovana fanariana maty ho an'ny faritra aerospace:
Fahafahana mamita ny faritra Aerospace:
Fomba fanamboarana Aerospace isan-karazany:
Machining Aerospace CNC ary mampihatra fampiharana:
Araka ny karazana fiaramanidina: fiaramanidina, sambon-danitra, balafomanga ary balafomanga;
Ny fanadihadiana momba ny tranga Minghe amin'ny indostrian'ny aero habakabaka
Safidio ny serivisy fanodinana Aerospace tsara indrindra sy ny serivisy fanaovana milina Cnc
Amin'izao fotoana izao, ny faritra misy ny aerospace dia manondrana any Etazonia, Canada, Australia, United Kingdom, Alemana, France, Sout Africa, ary firenena maro hafa manerantany. Izahay dia ISO9001-2015 voasoratra anarana ary voamarin'ny SGS ihany koa.
Custom serivisy maty casting china manome filaharana mateza sy mora vidy mifanaraka amin'ny famaritana anao amin'ny fiara, fiara, aerospace, elektronika, sakafo, fananganana, fiarovana, ranomasina ary indostria maro kokoa. Haingana handefa ny fanontanianao na handefa ny sarinao mba hahazoana teny maimaim-poana amin'ny fotoana fohy indrindra. Mifandraisa aminay na mailaka sales@hmminghe.com hijerena ny fomba ahafahan'ny olonay, ny fitaovana ary ny fampitaovana mitondra kalitao tsara indrindra amin'ny vidiny tsara indrindra ho an'ny tetikasan'ny faritra aerospace anao.